Ohere dị elu ọnụ ala nke fatịlaịza Crusher Machine Ndị na-eweta ya na ụlọ ọrụ ya | YiZheng
Na Abụọ-adọ Fatịlaịza Crusher Machine a makwaara dị ka mba-sieve ala crusher ma ọ bụ ugboro abụọ ndinuak igwe, ọ na-ekewa abụọ nkebi nke ndinuak. Ọ bụ ezigbo ndinuak akụrụngwa nke na-ọma natara site ọrụ na nkà mmụta banyere ígwè, ciment, refractory ihe, unyi, mwube engineering ụlọ ọrụ na ndị ọzọ ndi.
Gịnị bụ abụọ-adọ Fatịlaịza Crusher Machine?
Na Abụọ-adọ Fatịlaịza Crusher Machine bụ a ọhụrụ ụdị anwụrụ nke nwere ike mfe azọpịa elu-iru mmiri coal gangue, shale, cinder na ihe ndị ọzọ mgbe ogologo oge nnyocha na ịkpachara anya imewe site na ndị mmadụ si n'ọnọdụ dị iche iche nke ndụ. Nke a igwe adabara ndinuak ngwaọrụ dị ka coal gangue, shale, slag, slag, slag ewu n'efu, wdg The ndinuak urughuru size bụ ihe na-erughị 3mm, na ọ bụ adaba iji gangue na cinder dị ka nwekwara na esịtidem mmanụ ala maka brik ụlọ ọrụ; ọ na-edozi usoro mmepụta nke gangue, shale, brik, ihe mkpuchi ihe mkpuchi ọkụ na ihe ndị ọzọ dị elu nke na-esiri ike ịkụpịa.
Prinkpụrụ Ọrụ Twokpụrụ Njikere Fatịlaịza Crusher Machine?
Rodị abụọ nke rotors jikọtara n'usoro na-eme ka ihe ndị ahụ mebiri site na rotor dị elu ozugbo na-akụpịa ọzọ site na isi hama nke ngwa ngwa nke obere usoro. Ihe ndị dị n'ime oghere dị n'ime ime ngwa ngwa na-agbarịta ibe ha ọgụ ma na-emegharị ibe ha iji nweta mmetụta nke ntụ ntụ na ntụ ntụ. N'ikpeazụ, a ga-ebudata ihe ahụ ozugbo.
Ojiji igwe igwe nkpuru-uzo abuo
Production ikike: 1-10t / oge
Nri granule size: ≤80mm
Ihe ndị kwesịrị ekwesị: Mmiri humic, nsị ehi, ahịhịa, nsị atụrụ, nsị anụ ọkụkọ, sludge, biogas fọduru, coal gangue, slag wdg.
1. Ugboro abụọ rotor elu na ala abụọ-ogbo ndinuak.
2. E nweghị ihuenyo, grate ala, elu iru mmiri ihe onwunwe, mgbe clogging.
3. Ugboro abụọ-rotor abụọ-ogbo ndinuak, nnukwu mmepụta, orùrù urughuru size n'okpuru 3mm, ihe na-erughị 2mm aza ajụjụ maka ihe karịrị 80%.
4. Eyi na-eguzogide ọgwụ hama.
5. Unique mgbanwe ukpụhọde technology.
6. Hydraulic electric Starter ụlọ.
Abụọ-adọ Fatịlaịza Crusher Machine Video Display
Nhọrọ Oji Friji Fatịlaịza Ngwaọrụ Nhọrọ
Ihapu Size (mm)
Nke gara aga: Vetikal Chain Fatịlaịza Crusher Machine
Osote: Ugboro abụọ-axle Chain Crusher Machine Fatịlaịza Crusher
Okwu Mmalite Gịnị Bụ New Type Organic Fatịlaịza Granulator? New Type Organic Fatịlaịza Granulator na ọtụtụ-eji granulation nke organic fatịlaịza. A ọhụrụ ụdị organic fatịlaịza granulator, makwaara dị ka mmiri agitation granulation igwe na esịtidem agitation granulation igwe, bụ ọhụrụ ọhụrụ organic fatịlaịza granulat ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ BB Fatịlaịza igwekota igwe? BB Fatịlaịza igwekota igwe bụ ihe ntinye site na sistemụ nri na-eri nri, igwe nchara na-arịgo na ala na-eri nri, nke na-abanye ozugbo na igwekota, na igwe nri fatịlaịza BB site na usoro ịghasa pụrụ iche pụrụ iche na akụkụ atọ nwere akụkụ ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Ugboro abụọ ịghasa Composting Turner Machine? Ọgbọ ọhụrụ nke Double Screw Composting Turner Machine mere ka usoro ntụgharị ntụgharị abụọ dị mma, yabụ na ọ nwere ọrụ nke ịtụgharị, ịgwakọta na ikuku oxygenation, na-eme ka ọnụego gbaa ụka, na-ere ngwa ngwa, na-egbochi ịmalite ísì, na-echekwa ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Static Fatịlaịza batching Machine? Static akpaka batching usoro bụ akpaka batching akụrụngwa nwere ike na-aga na-arụ ọrụ na BB fatịlaịza akụrụngwa, organic fatịlaịza akụrụngwa, onyinye fatịlaịza ngwá na onyinye fatịlaịza ngwá, na ike mezue akpaka ruru ka ahịa ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Disc / Pan Organic & Compound Fatịlaịza Granulator? Nke a na usoro nke granulating diski na-onwem na atọ atara ọnụ, ikwado na-aga n'ihu mmepụta, ukwuu na-ebelata ọrụ ike ma melite oru arụmọrụ. Onye na-ewepu ya na moto ya na-eji eriri eriri na-agbanwe agbanwe iji malite nke ọma, belata mmetụta maka ...